06.03.2016 comments (0)
WQ: Muuse Xaaji Abees
Qoraal khiyaamo iyo dhagar ah oo taageeraya 4.5 iyo Wensiteka-ka Raxanreeb yaa isku ogaa?????
Aniga oo ah oday Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Muuse Xaaji Abees waxaan habeenkii bisha March ahayd 5 aaminay oo si hubaal la'aan ah uga qaybgalay shir la iigu sheegay in ay ku kulmayaan dad ka soo jeeda Puntland.
Waa la isoo dhoweeyey waana la i aqoonaayey oo magacayga ayaa la iigu yeeraayey. Waan fariistay, waxaana bilaabay in aan wax indho-indheeyo ama dhegeysto si aan wax u fahmo, waxaana ii soo baxday in ay meesha fadhiyaan rag iyo haween reer Puntland ah waxaana kala doortay in aan ka boxo shirka iyo in aan ka waaniyo dadkaas cudurka 4.5 oo ah jirro iyo khasaaro aan wax wanaag ah lagu gaarayn.
Sidaas darteed, waxaan ka codsanayaa madaxda iyo maamulka Website-ka Raxanreeb in ay si deg-deg ah uga bixiyaan Website-kooda magacayga iyo muuqalkayga, raalligelinna ka bixiyaan qaladka weyn ee dulmiga ah ee la iga galay, haddii kale ay khudbadaydu sidii ay ahayd u soo daayaan, ogaadana in aad denbi culus iyo khiyaamo iga gasheen.
Qoraa: Muuse Xaaji Abees